‘श्रीकृष्ण श्रेष्ठले चितवनलाई धेरै नै रूवाएर गए’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘श्रीकृष्ण श्रेष्ठले चितवनलाई धेरै नै रूवाएर गए’
२०७१ श्रावण २७, मंगलवार ०२:१८ गते
यतिबेला नेपाली चलचित्र उद्योग पूरा शोकमा डुबेको छ । कलाकारहरुको आँसु रोकिएको छैन । राष्ट्रले चलचित्र जगत्कै एक हस्ती गुमाउँदाको पीडा सहन नसक्नु नै छ । कहिल्यै विवाद र झमेलामा नफसेका सफल नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनले सबैको चीत्कार सुकाएको छ । उनको जन्मभूमि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको घुमफाङ गहिरो पीडामा परेको छ । एकातिर भीषण पहिरोमा थलिएको सिन्धुपाल्चोक फेरि अर्को पीडामा छटपटाएको छ । उनको हालको निवास काठमाडौँको म्हेपीले आँसु थाम्न सकेको छैन । अनि, उनलाई सुपरहिट नायक बनाउने जिल्ला चितवन धेरै रोएको छ ।
नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र चितवनको गहिरो सम्बन्ध छ । उनले अभिनय गरेका धेरै चलचित्र चितवनमा सुटिङ भएका छन् । उनका धेरै चलचित्रले चितवनमै ५१ र सय दिन मनाएका हुन् । उनलाई चितवनले सधैँ मुटुमा राखिरह्यो, यहाँका दर्शकले उनलाई भारीका भारी माया दिए । उनले पनि चितवनलाई कहिल्यै भुलेनन् । हरेक चलचित्र चल्दा एक पटक चितवन आएकै हुन्थे, उनी । निको भएर चलचित्र ‘कोहिनुर’को प्रदर्शनका क्रममा चितवन आउने सुरसारमा थिए उनी, तर दैवले टपक्क टिपेर लग्यो ।
‘आफन्त, उपकार, आफ्नो मान्छे, पाहुना, हामी तीन भाइ, सुख–दुःख, कहाँ भेटिएलालगायतका उनका थुप्रै चलचित्र चितवनको माटोमा सुटिङ भएका छन् । यी चलचित्रले नै श्रीकृष्णलाई सुपरहिट नायक बनाएको हो’, कलाकार पुष्प आचार्यले भने, ‘उहाँलाई चितवनले औधी माया गथ्र्यो, उहाँका चलचित्रले धेरैजसो चितवनमा ५१ दिन र सय दिन मनाउँथ्यो ।’
यसअघि दिल्लीको अस्पतालमा उपचारमा रहँदा श्रीकृष्णलाई चितवनबाट धेरै सहयोग पुगेको थियो । यहाँका युवाहरुले झोला थाप्दै श्रीकृष्णको उपचारका लागि रकम उठाएका थिए । त्यतिबेला उठाएको रकम संकलनले उहाँको ज्यान बाँचेको थियो । तर, यसपटक चितवनवासीले केही गर्न भ्याएनन् । जनैपूर्णिमाको दिन झिसमिसे बिहानीसँगै एकैचोटि निधनको खबर आयो, अनि सवै मूच्र्छित भए ।
‘यसअघि पनि दर्शकको मायाले बाँचेको हो, अहिले पनि दर्शकको मायाले बाँचेर आउँछु । दर्शकको माया नै मेरो औषधि हो । दर्शकहरु तपाईंसँग बसेर ‘कोहिनुर’ हेर्न म चाँडै
आउँछु । सुख र दुःख नै जीवनको चौतारी हो, म त्यही चौतारीमा छु । केही दिनमा निको भएर फर्कन्छु । म नभए पनि मेरो पछिल्लो चलचित्र ‘कोहिनुर’ हेर्नुहोला ।’ नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले दिल्लीको अस्पतालको बेडबाट मृत्युअघि भनेका शब्द हुन् यी ।
तर, यसपटक नायक श्रेष्ठलाई दर्शकको मायाले बचाउन सकेन । पहिलाजसरी चितवनवासीको मायाले बचाउन सकेन । आफूले खेलेको पछिल्लो नेपाली चलचित्र ‘कोहिनुर’ दर्शकसँग बसेर हेर्ने इच्छा उनको पूरा हुन सकेन । सँगै बसेर ‘कोहिनुर’ हेर्ने चितवनवासीको सपना पनि तुहियो ।
‘स्व. शिव रेग्मीले निर्देशन गरेका धेरै चलचित्रमा नायक श्रीकृष्णले खेलेका छन् । रेग्मी नारायणगढकै भएका कारणले पनि श्रीकृष्ण र चितवनको सम्बन्ध गहिरो बनेको हो’, कलाकार आचार्यले भने, ‘चितवन आउन भनेपछि हुरूक्कै हुन्थे उनी । उनले आफूलाई चितवनले धेरै माया गरेको बताउँथे ।’
उनका आफन्त, सुख–दुःख, कहाँ भेटिएला, आफ्नो मान्छेलगायतका चलचित्रले सबैभन्दा पहिले चितवनमा ५१ दिन मनाए । उनको सफलतामा चितवनको ठूलो हात रहेको छ । अहिले, नायक श्रेष्ठको निधनले सिङ्गो चितवनमात्र होइन, नेपाली चलचित्र उद्योगलाई नै ठूलो क्षति भएको छ ।
नेपाली चलचित्र उद्योगमा नृत्यको स्थापना गरेका सफल कलाकार श्रेष्ठको निधनले राष्ट्रले एउटा होनहार कलाकार गुमाएको छ । सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका नायक श्रीकृष्णको पछिल्लो ‘कहाँ भेटिएला’ नामको चलचित्र सुपरहिट भएको थियो । साँच्चै, अब नायक श्रेष्ठलाई कहाँ भेटिएला ? चितवनवासीले यही सोधेका छन् ।
‘कहाँ भेटिएला’ चलचित्र खेल्दा नै उनको यसै चलचित्रकी नायिका श्वेता खड्कासँग प्रेम गाँसिएको
थियो । ६ वर्षअघि कहाँ भेटिएलाको लागि नायिका खोज्ने क्रममा श्रीकृष्णले श्वेतालाई भेट्टाएका हुन् । चितवनमा यो चलचित्रले ५१ दिन मनाउँदा श्रीकृष्ण र श्वेताको माया अझ बलियो बनेको थियो । सँगै खेलेको फिल्मले ५१ दिन र सय दिन मनाउँदा उनीहरु कार्यक्रममा सँगै हिँड्थे । दर्शकसँगै बसेर दुवै जनाले फिल्म हेर्थे । यसो गर्दागर्दै उनीहरुको नछुट्टिने प्रेम गाढा बन्दै गयो । त्यही प्रेमले सार्थक रुप लिन ६ वर्ष लाग्यो ।
यही असार २३ गते ६ वर्षदेखिको प्रेमलाई सार्थक पार्दै नायिका श्वेता श्रेष्ठसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका श्रेष्ठ हनिमुन मनाउन इन्डिया गएका थिए । दैव पनि कति निर्दयी, हनिमुन मनाउँदा मनाउँदै बिरामी पो पा¥यो ! निको नबनाई टपक्क चुँडेर लग्यो । भनिन्छ, जुन फूल राम्रो लाग्यो त्यसैलाई पहिला टिपिन्छ । श्रीकृष्णलाई राम्रो फूल मानेर टिपिएको होला । यतिबेला चितवनवासीले यही सोचेर पीडाको घाउमा मलम लगाइरहेका छन् ।
पहिला डिप निमोनिया र पछि बोन क्यान्सरको कारणले उनको निधन भएको खबर सर्वत्र छाउँदा चलचित्र उद्योगले शिथिल र कमजोर बनेको महसुुस गरेको छ । उनको चलचित्र ‘कोहिनुर’ को प्रदर्शनका क्रममा दर्शकसँग बस्न नपाउँदा उनलाई अति दुःख लागेको थियो । ‘चलचित्र ‘कोहिनुर’लाई बच्चा सम्झेर काखमा राख्नुहोला, म नभए पनि यो चलचित्र हेर्नुहोला । म छिटै तपाईंहरुको सुःखदुःखमा साथ दिन आउने छु’, बेलाबेलामा गला अवरूद्ध भइरहेको आवाजमा श्रीकृष्णले मृत्यअघि यसो भन्दा दर्शकहरु उनको प्रतीक्षामा थिए । तर, समय यतिबेला बेइमानी र निष्ठुरी भइदियो । दैवले श्रीकृष्णलाई हनिमुनबाटै टिपेर लग्यो, कहिल्यै फिर्ता नगर्ने गरी ।
‘कस्तो पीडा, बिहे गरेको ३५ दिनमात्र पूरा भएको थियो । अझ धेरै सफल चलचित्र पस्कने सोचाइ थियो, उनको । उनी चलचित्रमा नृत्य भित्र्याउने कलाकार थिए । उनलाई गुमाउन पर्दाको पीडा साह्रै कष्टकर भएको छ’, पुराना कलाकार ऋद्धिचरण श्रेष्ठले भने, ‘उनीसँग मैले सुख–दुःख र नाता रगतको चलचित्र खेलेँ । धेरै मिजासिला र कहिल्यै विवादमा नपर्ने कलाकार थिए उनी ।’
‘नाच्न सिपालु, एक्सन पनि राम्रो, अभिनय निख्खर भएका कलाकार ! साँच्चै बहुमुखी प्रतिभा थियो उनमा’, श्रेष्ठले भने, नारायणगढको नारायणी कला मन्दिर आइरहन्थे । हरेक फिल्ममा चितवनलाई सम्झन्थे, सुःख–दुःख चल्दा यो चलचित्र त चितवनमा हिट हुन्छ भनेका थिए, नभन्दै सुपरहिट नै भयो । चितवनवासीको र श्रीकृष्णको आत्मीय सम्बन्ध थियो ।’
कलाकार ऋद्धिचरणले थपे, ‘हाम्रो पछिल्लो समय अस्टेलियामा भेट भएको थियो, उनी कति हँसिला देखिएका थिए । म फेरि अर्को सफल चलचित्र लिएर आउँछु भनेका
थिए । ‘कोहिनुर’ त ल्याए, तर अरु धेरै चलचित्र ल्याउन बाँकी थियो । भगवान्ले चाँडै टिप्यो ।’
‘मैले मिल्ने साथी गुमाएँ, त्योभन्दा ठूलो चलचित्र जगत्ले एउटा उज्ज्वल हस्ती गुमायो’, कलाकार पुष्प आचार्यले भने, ‘केही समयअगाडि शिव रेग्मी गुमाउँदाको पीडाको घाउ निको नहुँदै अर्को पीडाको घाउ लाग्यो । दैवको लीला जस्तो परे पनि सहनै पर्ने रहेछ ।’
‘मैले उनीसँग आधा दर्जन फिल्ममा अभियन गरेँ, त्यो क्षण सम्झँदा अहिले भक्कानो फुटिरहेको छ । मुटु काम्छ, म उनको पुरानो घर सिन्धुपाल्चोकको घुमफाङसम्म पुगेको छु । यतिधेरै चोट लागेको छ, चलचित्र जगत् नै अँध्यारोजस्तो भएको छ’, कलाकार आचार्यले भने ।
एक पटक त मृत्युलाई जितेका थिए उनले, तर यसपटक हार
खाए । ६ दाजु, एक बहिनी र सेतै कपाल फुलेका ८६ वर्षीया आमालाई सम्झनामात्र छोडेर गएका छन्, श्रीकृष्ण । सयभन्दा बढी फिल्म खेलेका श्रीकृष्णलाई युवा जमातले मात्र होइन, धेरै महिला र वृद्धवृद्धाले चिन्छन् । उनका चलचित्र धेरै नारीवादी छन् । धेरै वृद्धवृद्धाको दुःखलाई समेटिएको छ, उनी अभिनीत चलचित्रमा । त्यसैले, सबैको ढुकढुकी बनेका थिए श्रीकृष्ण ।
श्रीकृष्णको निधनको सबैभन्दा गहिरो चोट उनकी धर्मपत्नी श्वेता खड्कालाई भएको छ । बिहे गरेको ३५ दिनमा श्रीमान् गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ होला ? कुनै कल्पना गर्न सक्दैनौँ हामी । त्यो चोटको कुनै सीमा छैन । ठूलो बज्रपात भयो उनीमाथि । स्वास्थ्य ठीक छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि श्रीकृष्णसँग बिहे गरेकी श्वेताको सिन्दूर पुछियो । भर्खरै चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी श्वेतामाथिको चोटको घाउले जीवनभर सताउने छ । के गर्नु ! नियतिको खेल यस्तै रहेछ, जस्तो परे पनि सहनै पर्ने रहेछ । यो संसारको नियम नै यस्तै छ !